Global Voices teny Malagasy » Eropa: Fitsidihan’i Obama atsy ho atsy sy ireo fanamarihana momba izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Marsa 2009 5:48 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Hongria, Okraina, Polonina, Repoblika Tseky, Fifandraisana iraisam-pirenena, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Manomana fitsidihana any Grande-Bretagne, Frantsa, Alemana ary ny Repoblika Czech ny Filohan'i Etazonia Barack Obama amin'ny volana ho avy io, mandritry ny fivoahany voalohany mitsidika an'i Eropa taorian'ny nahalàny azy.
Anatin'ny hafany mitondra ny lohateny hoe “Te-hihaona aminy daholo izy mianakavy.” dia izao no nosoratan'i  P O Neill ao amin'ny A Fistful of Euros momba ity fitsidihana ho avy ity:
Zavatra iray misarika ny saina ho anareo mpanaraka akaiky ireny fihaonanbe ireny: tafiditra ao anatin'ny fitsidihana hataon'i Barack Obama eran'i Eropa amin'ny volana Aprily i Prague izay azo faritana ho toy ny fihaonambe isan-taonan'ny Etazonia-Eropa.
Ho seho goavana ho antsika izany, nefa angamba tsy dia ho amin'ny fahatanterahan-javatra loatra na dia filoham-panjakana sy solontena avy amin'ny governemanta 28 be izao avy amin'ny Kômisiona aza no hanatrika izany. Dia ho betsaka ny sarim-pifandraisan-tànana ‘anaty fihatsaram-belatsihy’ ho an'i Barack Obama. Sa izany mihitsy ve no nokendren'ny tarik'i Obama tamin'ny fanomanana fitsidihana firenena “bitika” toy itony?
Ny tenin'i Obama momba an'i Polona sy ny Repoblika Czech dia nisarika manokana ny sain'i  Taras ao amin'ny Ukrainiana:
[…] Tsaroako koa ny filazan'i Obama ny Poloney sy ny Czechs ho toy ny “demokrasia fledgling .”
Saingy izany  zavatra izany dia nampivoraka ny tongotro:
Mila mahatsapa i Rosia ny amin'ny hetahetanay tsy hay tohaina mba hanana fahaleovantena sy fandriampahalemana ny firenena toa an'i Polona sy ny Repoblika Czech. Amin'ny lafiny iray, ahiahy iraisana ny anay.
Koa satria aho Ukrainien bitika tsy misy ilàna azy miaina anaty firenena bitika kely iray tsy misy ilana azy koa izay nanohitra ny arsenal fahatelo lehibe indrindra eran-tany  toy ny famahanana akoho kely , dia toy ny Bittergate no fahitako ny fanamarihan'i Obama. […]
Nampitsangam-bolo ny maro ihany koa ny fanamarihan'i Obama mikasika an'i Hongria.
Pestiside.hu nanoratra hoe :
Andriamanitra ô! Andriamanitra ô! Niteny momba an'i Hongria i Barack Obama – nantsoiny tamin'ny anarany. Raha tsy mino ny takelaka voalohan'i Index.hu ianareo, mandehana fotsiny ao amin’ity dika an-tsoratry  ny vaovaon'ny konferansa navoakan'i O-mighty omaly ity ary karohy amin'ny fampidirana ny teny fototra hoe , well, duh. Eny, ny sary ao an-tsainy voalohany momba an'i Hongria fony tany amin'ny birao dia tsy mifanindran-dàlana velively amin'izay noeritreretintsika ( nambarany an-kitsirano fa isika dia toy ireny andian'olona marary saina mila fandraisana an-tànana maika ireny mba tsy hanaovantsika loza amin'ny hafa). Farafaharatsiny, fantany hoe iza isika!
Ary ity misy kiana henjakenjana ihany -mitodika betsaka amin'ny lafiny toekarena  avy amin'i Eva Balogh ao amin'ny Hungarian Spectrum:
[…] Manakiana an'i Barack Obama ihany koa ny sasany izay raha avy nihaona tamin'i Gordon Brown, Praiminisitra ao Grande Bretagne, dia niteny toy izao manaraka izao: “ Zavatra iray tao anatin'izay nifampiresahanay sy ny Praiminisitra Brown ny hoe ahoana no fomba ahafahana miara-miasa mba hiarahan'ny firenena ao anatin'ny G20, sy ireo firenena goavana rehetra manerana izao tontolo izao, ao anatina fiaraha-mientana voarindra, manaitaitra ny toekareny tsirairay avy; ahoana no hahatongavana amina fehin-kevitra iombonana, indrindra amin'ny lafiny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny banky [ara-bola] , mba tsy hisy fiantraikany goavana eo amin'ny tanintsika ny tsena vao misondrotra toa an'i Hongria sy Ukraine, ary hifandamina koa isika amin'ny fanampiana azy ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.”
Eny ary, dia izay izany izy ity any Hongria. Ahoana no ahasahian'i Obama mampitaha an'i Hongria amin'i Ukraine! Tsy atao mahagaga raha vetivety foana teo dia very sanda ny forint [volan-dry zareo angamba io] taorian'io kabary io. Ambonin'izany, fahasahiana goavana , hoy ireto olona ireto, ny firesahana olana maro hoe “hiantraika amin'ny morontsira-tsika.” Sady taiza koa moa izao savorovoro izao no nanomboka e? Tsy tany Hongria aloha e. Hongria dia mizaka fotsiny ny vokatry ny tsy fandraisana andraikitra tao amin'ny rafitra ara-bola amerikana . […]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/03/08/1893/
 izao no nosoratan'i: http://fistfulofeuros.net/afoe/the-european-union/they-all-want-to-meet-him/
 nisarika manokana ny sain'i: http://tap-the-talent.blogspot.com/2009/03/obama-like-poland-or-czech-republic.html
 demokrasia fledgling: http://the8thcircle.com/2008/09/30/fledgling-democracies/
 izany : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=101376609&ft=1&f=1004
 arsenal fahatelo lehibe indrindra eran-tany: http://www.fas.org/nuke/guide/ukraine/
 famahanana akoho kely: http://tech.mit.edu/V114/N11/ukraine.11w.html
 nanoratra hoe: http://www.pestiside.hu/20090304/nation-gasps-as-obama-finally-breathes-word-hungary/
 ity dika an-tsoratry: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/03/AR2009030301936.html
 kiana henjakenjana ihany -mitodika betsaka amin'ny lafiny toekarena: http://esbalogh.typepad.com/hungarianspectrum/2009/03/dark-economic-clouds-over-hungary.html